Dawladda Sucuudiga oo Xabsiga U Taxaabtay Mid Kamida Culimadda Waawayn ee Dalkaas | Baligubadlemedia.com
Dawladda Sucuudiga oo Xabsiga U Taxaabtay Mid Kamida Culimadda Waawayn ee Dalkaas
Sheekha la xidhay ayaa lagu magacaabaa Safr AlXawali, waxa uuna ahaa 68 sano jir kaas oo la sheegayo in xaaladdiisa caafimaad aysan wanaagsaneyn.
Ciidanka Sirdoonka Maamulka Aala Sucuud ayaa sheekha ugusoo galay gurigiisa iyagoona halkaas kaga qaatay gaari Ambalaas ah, taas oo muujineysa in ay si wacan ula socdeen in xaaladiisa caafimaad ay liidato.
Dadka deegaanka ayaa soo wariyey in ciidanka oo ahaa kuwo si aad ah u hubeysan ay qoryo ku qabteen ehellada Sheikha, iskuna hareereeyeen gurigiisa oo idil, kadibna ay ku riteen gaadhigii ay wateen iyagoona u kaxeeyey mid kamid ah xabsiyadooda ku yaala Magaalada Riyaadh oo ah caasimada wadanka Sucuudiga.
Sidaas si lamid ah ciidamo kale oo wajiyada u xidhan yihiin kana tirsan maamulka Aala Sucuud ayaa xoog ku galay guri uu deganaa nin la dhashay sheekha oo lagu magacaabo Sacadullaah illaa hadana la oga halka ay ula dhaqaaqeen.
Intaas kuma simane galabkii khamiista isla galabkii khamiista ayay hadane markale weerareen guri uu ka jiray aroos oo ay ku sugnaayeen laba wiil oo sheekha uu dhalay, kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay Cabdaallahi iyo Cabdi Raxmaan, waxa ayna ku kaxeysteen qoriga caaradiisa kadib markii dadkii ehelada ahaa ay isku dayeen inay wiilasha ka reebaan.
Warar laga helayo dhanka ehelada Shekha la xidhay ayaa sheegaya in Sh. Safr Alxawali waayadanba uu iska xanuunsanayey, sidaas ay tahayna maamulka aala sucuud ay ku xireen xabsi ku yaala magaalada Riyaadh, ayna u diideen in eheladiisa ay ogaadaan xaalada u kusugan yahay.